Midab Woodie Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Midab Woodie Forex Tusiyaha
Midab Woodie Forex Tusiyaha
Midab Woodie Forex Tusiyaha waa aalad Forex ganacsiga fudud in qof kasta oo qaba fahamka asaasiga ah ee suuqa Forex ku ganacsan kartaa iyadoo tilmaame this. tilmaame waa mid waxtar leh in ay la wareegaan qaar ka mid ah momentums fiican ee suuqa halkii dilis kasii darto oo dhan isbeddel. Ma laga yaabaa in ku haboon dilis arrimuhu oo dhan, laakiin waxa hubaal waa mid waxtar leh in ay la wareegaan kuwa fursado kaas oo ay leeyihiin hamiga sare. The midabka leh Woodie Tusiyaha waxaa loo isticmaali karaa in ay ku ganacsan in kasta oo waqti iyo wax kasta oo lammaane lacagta. Laakiin haddii aad si dhab ah rabto in aad hesho natiijo wanaagsan ka dibna ha ganacsiga 1 jir markii daqiiqadii. Dhab ahaantii Ganacsi ee qaab dhismeedka waqti ka badan 5 daqiiqadii waa wanaagsan yahay haddii aad tahay scalper a soo celiyey ee.
Marka aad rakibi midab Woodie Tusiyaha aad shaxda waa sidan u eg:
Midab Woodie tilmaame waa tilmaame caadada ka dhigtay farsamo. waxay ka kooban tahay histogaraam in bedbeddeso geyiga togan iyo kuwa taban oo waxaa kale oo uu leeyahay oscillator ah oo dahab ah. Haddii aad aragto oscillator dahabka ah oo aad noqon doontaa mid ka wareersan. Waxaan helay in haddii aad eegto kaliya histogaraam iyo iska indha oscillator ah, waa wax fiican. Marka histogaraam ka guuraan dhul wanaagsan u sameeyaan negative waa in aad soo iibsato iyo qeybsanaan ku xigeenka. Ka hor inta jiidaya keebka xusuuso- SUUQA WAA IN LA Daalacanayo.
Gadashada Xaaladaha Isticmaalka midabka leh Woodie Tusiyaha.
– Marka histogaraam ee tilmaame woodie midab gaartay wanaagsan ka xun, meel si iibsan a.
– Qaado faa'iido markii histogaraam ee guuro dhulka negative.
Iibinta Xaaladaha Isticmaalka tilmaame midabka leh Woodie.
– Marka histogaraam ee tilmaame woodie midab dhaco si xun ka wanaagsan, meel si iibiyay a.
– Qaado faa'iido markii histogaraam ee guuro dhulka wanaagsan.
Midab Woodie Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Midab Woodie Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo midabka leh Woodie Forex Indicator.mq4?
Download midabka leh Woodie Forex Indicator.mq4
Copy midabka leh Woodie Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on midabka leh Woodie Forex Indicator.mq4
Tusiyaha midabka leh Woodie Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saarto midabka leh Woodie Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousFncd Forex Tusiyaha
Next articleGlasneba Forex Tusiyaha